Kwenharaunda Endorsement Tweets Varipo! | Martech Zone
Svondo, Gunyana 20, 2009 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Ko mukurumbira zvibvumirano zvinoshanda here? Ehe, vanodaro. Zvikasadaro, hatingazowone kushambadza nevanhu vane mukurumbira mazuva ese, handiti? Chibvumirano chaCatherine Zeta-Jones chekubvumirana neT-Mobile chinganzi chaikosha makumi maviri emamiriyoni. Shure kwaizvozvo, kutengesa kwenyika kweT-Mobile kwakasvetuka 20% panguva yemushandirapamwe. Mhedzisiro mvumo zvino pa Twitter, futi!
Nei kushambadzira kwemukurumbira kuchishanda?
Yekushambadzira kushambadzira inoshanda pamatanho matatu akasiyana:
Familiarity - tinoona mazana ezviziviso zuva nezuva, saka kugona kusiyanisa kushambadza kwakakosha uye vane mukurumbira vanogona kupa izvo. Catherine Zeta-Jones zvirokwazvo akaita kuti vanhu vanyatso tarisisa kupfuura mukomana weVerizon!
godo - isu tiri inotyairwa (isina kudzika) nzanga uye zviroto zvehupfumi uye mukurumbira zvinotikurudzira. Kuona mumwe munhu watinotarisira kuva akafanana naye kana kukwezvwa naye kwakasimba kushambadza nzira. Pasina mubvunzo kuti Ashton Kutcher naOprah Winfrey (vanogomera) vakatyaira mamirioni evashandisi vatsva kuenda kuTwitter… izvozvi vanogona kuita mari pazviri!
Mukurumbira - kuzivikanwa sebhizinesi rine mukurumbira kiyi kune bhizinesi 'kukura. Tsika hadziwanzo kuita bhizinesi neimwe bhizinesi kunze kwekunge ivo vachivimba kuti bhizinesi iri pamutemo. Kubvumirwa kune mukurumbira kunogona kumhanyisa nguva inotora kuti bhizinesi rako rionekwe seremukurumbira.
Nekutangwa kwe Sponsored Tweets, unogona kutenga yakatsigirwa maTweets kuburikidza neIzea's system. Kwete joke pano - unogona kuwana munhu wese kubva kuna Kim Kardashian kuna Bob Vila! Ini ndasaina nhasi uye ndine mutengo wekunze we $ 25 pa tweet. Ini ndaifunga kuti zvakanaka… zvichipiwa kuti mutengo waKendra wakanyanya kudhinda saiti! (Ini handina chokwadi chekuti Kendra achange achityaira kutengesa kweangu e-Bhuku or kuwedzera traffic kubhulogi)… Ini digress.
Mashandisiro Anoita Tweets Anoshanda
Tags: kushambadza kwevakakurumbiratweets dzinotsigirwaTwitter
Kubatanidza Retweet Mabhatani muWako WordPress Blog
Sep 21, 2009 na5: 11 PM
Pfungwa dzinonakidza DK. Ingo funga kuti ndingataure kumwe kutsva kunonakidza kunotsigira mukurumbira mvumo. Mazhinji ezvinyorwa zvedzidziso zvinobva pabepa rekusimbisa vanhu rakaburitswa naRichard Petty naJohn Cacioppo pane yavo Elaboration Likelihood Model. Zvavanotaura ndezvekuti kune nzira mbiri dzekutanga dzekunyengetedza kwepfungwa, iyo yepakati uye yekumberi (inofungidzirwa kuve yakashanduka senge nzira yekufunga yekuvhara ruzivo rwakawandisa). Iyo yepakati ndeyekupokana kunonzwisisika uye kunogadziriswa nepfungwa dzakazara zviwanikwa nepo pariperi iri nzira yepfungwa yekugadzira mhando ye "kupfuura" kutonga kwemarudzi. Izvo zvinonyanya kufadza ndezvekuti zvinhu zvinotarisisa maitiro atinopa mutongo kune ruzivo rwunogadziriswa parutivi zvinonyanya kutemerwa nekusafarira kwevanhu - senge zera, kukwezva pabonde, chinzvimbo chemukurumbira, kana pfuma yemunhu. Zvinhu zvinonakidza kwazvo, uye kune matani ekutsvagisa kunze uko kana iwe kana chero vaverengi vaida kutarisa.